Thwebula Audible 2.9 – Vessoft
Oluzwakalayo – a software ukulanda futhi amabhuku alalelwayo online. Isofthiwe kwenza ukucinga izincwadi zihlukaniswe izinhlobo ezahlukene kanye nemikhakha emtatsheni online enkulu. Oluzwakalayo ikuvumela ukuba wengeze izincwadi Bookmark, switch phakathi zindlela lekufundza ekulalela, ulungise speed sokudlala, sebenzisa imodi ubuthongo njll oluzwakalayo unikeza abasebenzisi amabheji sokuzuza ekulalela amabhuku alalelwayo futhi inikeza ulwazi mayelana nemicimbi eyahlukahlukene elihlobene Ababhali ezikhethiwe. Futhi oluzwakalayo ikuvumela ukuba ulungiselele izaziso, ukudlala noma thwebula isidingo umsebenzisi.
A wezincwadi omkhulu lwamabhuku alalelwayo
Zindlela ukufunda nokulalela
Ulungisa speed sokudlala
Ulwazi ngezenzakalo ezihambisana abalobi of izincwadi
Amandla ukushintshanisa amabhuku alalelwayo
Amazwana on Audible:
Audible Ahlobene software:
Abafundi E-book Ngaphezu Kalula ukucinga bese ufunda izincwadi. Isofthiwe kuhlanganisa umtapo enkulu izincwadi zihlukaniswe izinhlobo ezahlukene.
English, Русский, العربية, Bahasa Indonesia... Uber 3.131.4
-Internet Isiphequluli odumile ngejubane eliphezulu kwekhasi loading. Futhi isofthiwe encrypts traffic ukuvikela ngokumelene namathonya yangaphandle.